January 20, 2021 18:47 (IST)
New York: The coronavirus pandemic should not be used as an excuse to clamp down on fundamental freedoms, the UN human rights office (OHCHR) reminded authorities in Zimbabwe on Friday.
Zimbabwean VP's wife arrested on money laundering, fraud charges
Harare/Xinhua/UNI: Zimbabwean Vice President Constantino Chiwenga' estranged wife, who was arrested over fraud charges, will appear in court on initial remand on Monday, Zimbabwe's anti-corruption commission said.
Zimbabwe â€˜facing worst hunger crisis in a decadeâ€™
New York/IBNS: Zimbabwe is facing its worst hunger crisis in a decade with half of the population – 7.7 million people – food insecure, the World Food Programme (WFP) said on Tuesday.
Putin conveys condolences over death of ex-Zimbabwean President Mugabe
Moscow, Sep 6 (Sputnik/UNI) Russian President Vladimir Putin has conveyed his condolences to Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa over the death of the country's long-time leader Robert Mugabe.
Zimbabwe's president cuts short South African trip after Mugabe's passing
Harare, Sept 6 (Xinhua/UNI) Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa left Cape Town, South Africa, earlier than scheduled, on Friday morning following the passing of former President Robert Mugabe, Presidential Spokesperson George Charamba said.
Zimbabwe's former President Robert Mugabe dies
Harare, Sept 6 (IBNS): Zimbabwe's independence icon, who later turned to an authoritarian leader-Robert Mugabe-died on Thursday.
UN boosts humanitarian appeal to help tackle Zimbabweâ€™s â€˜worst-everâ€™ hunger crisis
New York, Aug 8 (IBNS): With Zimbabwe now experiencing its “worst-ever hunger crisis”, the UN food relief agency has revised its humanitarian appeal to step up food assistance to people most affected by drought, flooding, and economic stagnation.
New York, July 20 (IBNS): Severe drought has rendered more than a third of rural households in Zimbabwe – or around 3.5 million people – dangerously food insecure, the UN World Food Programme (WFP) revealed on Friday.
Zimbabwe mine blast kills 8
Harare , May 27 (Xinhua/UNI) At least eight people died at a mine in Mazowe, about 40 km north of Harare, after a mine shaft they were working in collapsed following an explosion, the information department in the Zimbabwean government said Monday.
Zimbabwe govt declares state disaster over accident claiming 13 lives
Harare, Apr 16 (Xinhua): Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Tuesday declared a state of disaster over a freak accident that killed 13 members of an apostolic faith sect on Monday in Hwedza, Mashonaland East Province.
New York, Mar 22 (IBNS): Dire conditions persist in vast areas of southern Africa affected by Cyclone Idai as heavy rain continues to cause “massive destruction”, the UN said on Thursday, while aid teams scale up efforts to reach those most in need.